7Day News သူရဲကောင်းဆုရှင် အဖြစ် ဦးဌေးနိုင် ချီးမြှင့်ခြင်းခံရ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
7Day News သူရဲကောင်းဆုရှင် အဖြစ် ဦးဌေးနိုင် ချီးမြှင့်ခြင်းခံရ
သတင်းနှင့် ဓါတ်ပုံ 7Day News
၂၀၁၂ခုနှစ်အတွက် 7Day News သူရဲကောင်းဆုရှင် 7Day News Hero လူပုဂ္ဂိုလ်သုံးဦးနှင့် အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုအား ဂျာနယ်(၁၁)နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်အခမ်း အနား တွင် ပေးအပ်ချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့် (၁၀)နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားတွင်လည်း ၂၀၁၁ခုနှစ်အတွက် လူပုဂ္ဂိုလ်သုံးဦးနှင့် အဖွဲ့အစည်း နှစ်ခုအား Hero ဆုပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
ခုတ်မောင်းလာသည့် မီးရထားအားကြောက်လန့်ကာ ချောင်းကူးတံတား ရထားသံလမ်းပေါ် စုံရပ်နေသော မြေအဖွားနှစ်ဦးအား ရထားနှင့် တိုက်လုဆဲဆဲတွင် စက်ခေါင်း ပေါ် မှ ခုန်ချကာ သက်စွန့်စံဖျားကယ်တင်ခဲ့သူဖြစ် သည်။
၂၀၁၂ ဧပြီ ၁၁ရက်က ရန်ကုန်-မော်လမြိုင်(အစုန်ရထား) အမှတ် ၁၇၆ ကိုမောင်းနှင်လာစဉ် ဒါးပိန်ဘူတာအ၀င်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အက်ရှင်ကားဆန်ဆန် ကယ်တင်မှု တစ်ခုဖြစ်သည်။
အသက် ၆၂ နှစ်အရွယ်အဘွားဖြစ်သူနှင့် အသက် ၈ နှစ်အရွယ်မြေးဖြစ်သူတို့ရထားလမ်းဖြတ်ကူးစဉ် ရှေ့တည့် တည့်မှမောင်းနှင် လာသောရထားကိုတွေ့ပြီး ကြောက် လန့် ကာရောက်သည့်နေရာမှာပင်စုံရပ်နေခဲ့ကြခြင်းဖြစ် သည်။ စက်ခေါင်းမောင်းက အရေးပေါ် ဘရိတ်ကိုသုံးလိုက်သော်လည်း လုံးဝရပ်တန့်နိုင်ခြင်းမျိုး မဟုတ်သဖြင့် ဦးဌေးနိုင်သည် တစ်နာရီခုနစ်မိုင်နှုန်းမောင်းနှင်အားရှိနေသေးသည့် စက်ခေါင်းပေါ်မှခုန်ချပြေးဆင်းပြီး မြေးအဘွားနှစ်ဦးကို တွန်းထုတ် ဖယ်ရှားလိုက်သည်။ ထိုအခါ ၃ ဦးစလုံး ရထားလမ်းတံတားပေါ်မှ ချောင်းထဲသို့ပြုတ်ကျသွားခဲ့ပြီး အသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အသက်ကိုစွန့်၍ မြေးအဘွားနှစ်ဦး၏အသက်ကို ကယ် တင်ခဲ့သော ထိုလက်ထောက်စက်ခေါင်းမောင်း၏ သူရဲကောင်း စိတ်ဓာတ်ကို အခင်းသားမြင်တွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့်7Day News အယ်ဒီတာအဖွဲ့က လက် ထောက် စက် ခေါင်းမောင်း ဦးဌေးနိုင်အား 7Day News Hero အဖြစ်သူရဲကောင်းဆုပေးအပ်ရန်ု ရွေးချယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကိုဌေးနိုင်အား နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းက ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်က မြန်မာနိုင်ငံသား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တစ်ယောက်ပါ။ အဲဒီတော့ ဘယ်ဘာသာ၊ ဘယ်လူမျိုးရယ်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် ကယ်တင်ထိုက် သူကို ကယ်တင်ရမယ်လေ။ ကျွန်တော့် အနေအထားအရလည်း တာဝန်ပိုင်းမှာ ဖြစ်နေတယ်လေ။ ကျွန်တော်ကယ်တင်လို့ ရနိုင်မယ့် အရည်အချင်းမှာ ကျွန်တော် မကယ် တင်ဘူး ဆိုရင် လူသားမဆန်တဲ့သူ ဖြစ်သွားမယ်။ ”
Weekly Eleven နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်မှ ကောက်နှုတ်ချက်
ကိုဌေးနိုင်အကြောင်း ဆက်စပ်ပိုစ်များ ဖတ်လိုလျင် =>http://www.m-mediagroup.com/news/tag/uhtaynaing
This entry was posted on March 8, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← အစ္စရေးအား နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ် ခုံရုံးသို့မတင်ရန် ကနေဒါမှ ပါလက်စတိုင်းကို သတိပေး	ခိုးဝင်လာသူမရှိသည်ကိုအစိုးရမှပြောရန်လိုအပ်ဟု ဦးရွှေမောင်မှပြော →